खेलाडीको मनोबल बढाउन कार्टुनका दर्शक ! | Sagarmatha TV
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वभर खेलकुद गतिविधी ठप्प छन् ।
कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख ४४ हजार नाघेको छ भने पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वभर ५४ लाख बढी संक्रमित भएका छन् । संक्रमण फैलिएको यो विषम अवस्थामा पनि जर्मन बुन्डेसलिगा अन्तर्गतको खेल भएको छ ।
प्रतिस्पर्धामा १३ हजार समर्थक उपस्थित भए । तर दर्शक कृत्रिम थिए अर्थात कार्टुनका ।
बन्द रंगशालामा १३ हजार समर्थक ! झट्ट सुन्दा अचम्म लागेपनि जर्मन बुन्डेसलिगा अन्तर्गत शनिबार राति बोरुसिया मोन्चेनग्लाडवाच र वायर लिभरकुसेनबीच भएको प्रतिस्पर्धामा १३ हजार समर्थक देखियो । टेलिभिजन तथा लाइभ भिडियो हेर्नेले दर्शक नै सोचेपनि त्यहाँ उपस्थित वास्तविक दर्शक थिएन । थिएत कार्टुनका दर्शक ।
घरेलु टोली मोन्चेनग्लाडवाचले आफ्ना खेलाडीको समर्थन गर्न १३ हजार कार्टुनको दर्शक तथा समर्थक मैदान उतारेको थियो । खेलाडीलाई थप प्रोत्साहन गर्न पनि कार्टुनका दर्शक तथा समर्थक राखिएको एक अधिकारीले बताए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वभर आतंक मच्चाएको र केहि खेलाडि पनि कोरोना संक्रमित भएकै कारण खेल हेर्न र समर्थन गर्न आउने पनि उच्च जोखिममा पर्ने भएकाले १३ हजार कार्ड बोर्डमा मान्छेको आकृति बनाएर दर्शक बस्ने सिटमा राखिएको हो । कोरोना भाईरसको महामारीबीच सुचारु लिगको खेलसमेत बन्द रंगाशालामा खेलाईएको थियो ।
कोरोनाको महामारीले स्थगित लिग सञ्चालनमा आएपनि धेरै देशका दर्शकलाई मैदानमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । खेलहरु दर्शकबिना भईरहेका छन् । शनिबार राति मोन्चेनग्लाडवाचको मैदानमा भएको खेलमा लिभरकुसेनले ३–१ गोल अन्तरको जित निकालेको थियो । लिभरकुसेनका लागि केइ हार्भटेजले दुई गोल गर्दा स्भन बेन्डरले एक गोल गरेका थिए । घरेलु टोलीका मार्कुस थुरामले एक गोल फर्काए ।